Tetikasa fanodinkodinam-bola sy seminera nampiazakin'ireo mpahay siansa
Ny orinasa Incorporated dia nahatsikaritra fa ny folo amin'ireo olona folo ao amin'ny vahoaka dia tsy mandray ny fanavotana ara-dalàna, ny fanomezan-dàlana, na ny fanavahana izay iantsoana azy ireo araka ny tokony ho izy avy amin'ny IRS. Noho izany, manolotra programa ho an'ireo mpanjifanay izahay izay miara-miasa amin'ny manam-pahaizana momba ny hetra ambony indrindra amin'ny firenena amin'ny lalànan'ny orinasa sy ny fehezan-dalàna momba ny hetra mba hanampiana azy hampidina ny hetrany amin'ny faran'ny lalàna.
Hanendry anao ny hetra amin'ny hetra, ny mpanolontsaina ara-barotra, ary ny stratejika momba ny orinasa ho an'ny fanohanana sy fitsaboana tsy voafetra. Ity ekipa ity dia hiaraka aminao tsy amin'ny fotoana ara-potoana, fa mandritra ny fotoana manontolo dia mpividy miaraka aminay ianao.
Ny famerenana ny roa taona farany amin'ny fiverenana hetra dia hotanterahana ao amin'ny biraon'ny Robert J. Greene, CPA ary Dennis P. Skea, izay niasa nandritra ny taona 28 ho solontenan'ny IRS.
Noho izany dia mahazo alàlana amin'ny lalàna isika hanatsara ny fiverenan'ny hetra alohan'ny telo taona raha toa ka mitaky izany ny toe-draharaha ary mahazo ny dolara ara-bola izay azonao mihoatra ny IRS. Maro ny mpamatsy vola haka fotsiny ny isa ao anaty boaty ho an'ny endrika hetra, fa tena manome tetikady manokana hetra mba hampihenana ny enta-mavesatra ho anareo ary hitazona vola amin'ny tananareo.
Amin'ny fijerena ny volanao sy ny fehezan-dalàna momba ny hetran-dalàna dia azonareo antoka fa handoa ny saram-pahefana faratampony indrindra ianareo. Raha tsy mamonjy anareo $ 3,000 ianao rehefa miverina dia tsy misy vidiny ho anao.
Amin'ny alàlan'ny fanadihadiana mialoha sy fanaraha-maso ny fanaraha-maso nataona ekipa manam-pahaizana IRS teo aloha dia hahazo ny fanavahana ara-dalàna, ny tambin-karama ary ny fanavotana rehetra ary hanamora ny fanoratana ara-dalàna tsy ara-dalàna raha tsy misy ny fanamarinana ny fiverenanao.
Ankoatra izay dia manome tolotra fanofanana hetra ho an'ny 80% amin'ny mpanjifa izay ahafahantsika manompo.
Haniraka anao fitaovam-pampianarana an-kira ampiasaina miaraka amin'ny serivisy izahay.
Ny fizarana ara-teknika dia manome ny mpanjifantsika amin'ny fiarovana ny fanaraha-maso. Raha ampahafantarina anao ny karazana fanaraha-maso rehetra dia hampiseho anao tsy misy vidiny.
Raha mbola tsy mamonjy anareo $ 3,000 eo amin'ny haba ianao dia averinay indray ny saram-panompoana anay, ary hiantohanay izany mandritra ny roa volana.
Ny fandoavam-bola dia latsaky ny ampahatelony ny vidin'ny fiantohana ara-barotra antoka $ 995 amin'ny taona voalohany. Raha mamela anay hanao ny asam-barotra amin'ny banky izahay dia miantoka $ savings amin'ny $ 5,000 amin'ny hetra amin'ny vidiny $ 1,495. Hianatra teknikam-panitsiana hetra izay afaka maharitra mandritra ny androm-piainana.
Raha te handray anjara amin'ny fandaharanasam-bola hividianana hetra, miantsoa iray amin'ny mpanolo-tsaintsika amin'ny 800-830-1055.